Jonga le Galari yeeMifanekiso zeNdawo zoLuntu
Sayensi Izinto zeGeological
Iifoto zoMhlaba zoMhlaba. Ifoto (c) 2007 u-Andrew Alden, onikwe ilayisenisi kwi-About.com (inqubomgomo yokusetyenziswa ngokufanelekileyo)
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokuhlenga iifom zomhlaba, kodwa ngokubanzi, kukho iindidi zintathu: iifom zomhlaba ezakhiwe (iifompo), imihlaba yomhlaba eqoshiwe (i-erosional), kunye neefom zehlabathi ezenziwe yimfudu yomhlaba we-tectonic. Nazi ezinye iifom zelizwe ezizimeleyo.
Ezinye iiNdawo zoMhlaba
Umtsalane obalaseleyo uninzi lwentlambo edibeneyo apho umlambo ushiya iintaba.
Cofa isithombe ukuze ubone ubungakanani obukhulu befayile yeDeception Canyon, kufuphi nePalm Springs. Xa iintaba zichithe iindawo ezinqumlayo, iifudlana zithwala njenge- alluvium . Umlambo weentaba unamaqabunga amaninzi ngokugqithiseleyo xa i-gradient yayo iphezulu kwaye amandla aninzi. Xa umlambo ushiya iintaba kunye neenkukuma kwi-plain, ityehla ininzi yale ndawo yonke. Ngoko ngaphezu kwamawaka eminyaka, i-pile edibeneyo yombumba yakha - i-fan alluvial. Umshicileli osisigxina unokuthiwa endaweni ebizwa ngokuthi i-alluvial cone.
Abalandeli be-Alluvial bafumaneka kwi-Mars.
Iifoto zoMhlaba zoMhlaba. Ifoto (c) ka-2009 u-Andrew Alden, onikwe ilayisenisi malunga ne-About.com (inqubomgomo yokusetyenziswa ngokufanelekileyo)
I-bajada ("ba-HA-da") yi-apron enkulu ye-sediment, isixa sabaninzi abaninzi. Iqulethe inyawo lonke uluhlu, kulo mzekelo, ubuso bempuma yeSierrav Nevada.
Ibha yindawo eninzi yentlabathi okanye i-silt, ibeka phantsi apho iimeko zibiza khona ngoku ukuyeka nokuyeka umthwalo wayo.
Iibhokhwe ziyakwenza apho kukho ukuhlangana kwamanzi enamandla: kwiintlanganiso ezimbini zemilambo okanye apho umlambo udibana nolwandle. Lapha emlonyeni woMlambo waseRussia, umlambo okhoyo ngoku udibana ne-surfour--fushing surf, kwaye kwintlanzi engapheliyo phakathi kwembini, i-sediment ephetheyo ifakwe kwisilingo esibubele. Iziphepho ezininzi okanye umlambo ophakamileyo uphendulela ibha ngenye indlela okanye enye. Okwangoku, umlambo ufumana ishishini lawo lwenziwa ngetya elincinci elithatha ngapha kwebar.
I-bar ivame ukukhusela nokuhamba. Ngaloo ndlela umnqwelisi angasebenzisa igama elithi "ibha" ngenqwelwana yenkqantosi, kodwa i-geologist iyalondoloza igama le-quil of alluvium - izinto eziqhutywe yimilambo - phantsi kwefuthe lwamanzi.
IBrarier Island, eNew Jersey
Iziqithi ezinqamleyo zide, iindawo ezincinci zentlabathi eziphakanyiswe ngamaza phakathi kolwandle kunye neentlambo zonxweme. Oku kuseSandy Hook, eNew Jersey.
Iifoto zoMhlaba zoMhlaba. Ifoto (c) ngo-2006 u-Andrew Alden, onikwe ilayisenisi malunga ne-About.com (inqubomgomo yokusetyenziswa ngokufanelekileyo)
Amabhishe mhlawumbi iyona ifom yehlabathi eyaziwayo kakhulu, eyenziwa ngumthendeleko oshukunyayo owenza izilwanyana zithintele umhlaba.
Iifoto zoMhlaba zoMhlaba. Ifoto nguBruce Molnia, US Geological Survey
Xa imilambo idibana nolwandle okanye i-echibi, idiliza i-sediment yayo, eyenza unxweme lwangaphandle kwi-form of land ebonakala yinto enxantathu.
Iifoto zoMhlaba zoMhlaba. Ifoto (c) u-Andrew Alden, onikwe ilayisenisi kwi-About.com (inqubomgomo yokusetyenziswa ngokufanelekileyo)
Iindunduma zenziwe ngeentambo ezithwele kwaye zifakwe umoya. Bagcina imilo yabo yesimo njengoko behamba. Izidumbu zeC Kelso zihlala kwiLwandle laseMojave.
I-Floodplain, eNorth Carolina
Iifoto zoMhlaba zoMhlaba. Ifoto ifaneka uDavid Lindbo phantsi kwelayisenisi yeClass Commons
I-Floodplains ziindawo ezicwangcisiweyo kunye nemifula efumana i-sediment xa umlambo uphela. Lo useNew River, eNorth Carolina.
Iifoto zoMhlaba zoMhlaba. Ifoto (c) 2003 u-Andrew Alden, onikwe ilayisenisi kwi-About.com (inqubomgomo yokusetyenziswa ngokufanelekileyo)
Ukuhlalisa umhlaba, kuzo zonke iintlobo zabo, zibandakanya i-sediment eziphuma ezindaweni eziphakamileyo kwaye zifake kwiindawo eziphantsi. Funda kabanzi malunga namaplaphu omhlaba apha kwaye ujonge igalari yehlabathi .
I-Lava Flow, iOregon
Iifoto zoMhlaba zoMhlaba. Ifoto ifoto yeBdsworld yeFlickr.com phantsi kwelayisenisi ye-Creative Commons
I-lava igeleza ukusuka kulo mboko obsidian obunzima eNewberry Caldera ukuya kumathala amakhulu ase-basalt anzima ukusuka emachibi atyebile.
Iifoto zoMhlaba zoMhlaba. Ifoto ifanele i-Zoltán Kelemen yeFlickr.com phantsi kweLayisensi yeCredit Commons
Iifom zefom ehamba ngokwemvelo phakathi kweebhanki zomlambo kunye nomkhukula ojikelezayo. Zivame ukuguqulwa kwiindawo ezimiweyo.
Iifom zefom ehamba njengeemilambo zikhuphuka kwiibhanki zazo ngenxa yesizathu esilula: ikhoyo ngoku iyancipha emanzini, ngoko ke inxalenye yomthwalo wecediment emanzini igxothwa kwiibhanki. Kwizikhukhula ezininzi, le nkqubo ikwakhula ukunyuka okulula (igama livela kwi-French levée , oku kuthetha ukuphakanyiswa). Xa abantu beza kuhlala emlanjeni wamanzi, bahlala beqinisa i-levee baze baphakame. Ngaloo ndlela izazi-geologists zithatha ubuhlungu ukuba zichaze "i-levee yemvelo" xa ifumana enye. Amaphunga asemfanekisweni, eTransylvania, eRomania, anokuthi abe nequmrhu lokuzibandakanya, kodwa aqhelekileyo kwiimvumba zemvelo - eziphantsi kunye nobumnene. Ama-Levees nawo awenza phantsi kwamanzi, kwinqanawa yamanzi.
I-Volcano yeMdaka, eCalifornia
Iziqhumane zamadaka zihamba ngokubanzi ngobukhulu kunye nokubunjwa kwezinto ezincinci ukuya kwiintaba ezipheleleyo eziqhuma ngegesi evuthayo.
I-volcano yedaka idla ngokuba yincinane, isakhiwo sesikhashana. Ehlabathini, ukuqhuma kwamatye kufumaneka kwiindidi ezimbini zeendawo. Ngenye, i- volcanic gases ivela kwiindawo ezinobungcipheko zokubangela ukuqhuma okuncinci kunye nokwakha izibonda zodaka ezingaphezu kweemitha okanye eziphakamileyo ezimbini. Yellowstone kunye neendawo ezifana nazo zizele. Kwesinye, iigesi zihamba zivela kwi-deposit underground-ezivela kwiimigibe ze-hydrocarbon okanye apho i-carbon dioxide ikhululwa khona kwiimpawu zetamitha. Iziqhumane ezinkulu zedaka, ezitholakala kwingingqi yaseLaspian Sea, zifikelela kwikhilomitha ububanzi kunye namanamitha amaningana ubude. Ama-hydrocarboni ngaphakathi kwawo aqhutywe ngumlilo. Le ntabala yodaka iyingxenye yenkalo ye-Davis-Schrimpf eyimile, kufuphi neSalton Sea eningizimu yeKalifornia.
Ngaphantsi kolwandle, iziqhumane zamadaka zivela kwiintlobo ezimbini. Iyokuqala iyafana naleyo yomhlaba, eyakhiwa yi-gases yemvelo. Uhlobo lwesibini luyinxalenye enkulu yamanzi afakelwe ngokunciphisa amacwecwe e-lithospheric. Iingcali zenzululwazi ziqala ukuzifundela, ngokugqithiseleyo kwicala lasentshonalanga yeMananas Trench esifundeni.
"Umdaka" ngowona gama lichanekileyo. Libhekisela kwiindawo ezenziwe ngumxube weengqungquthela zodongwe kunye nobukhulu bebumba. Ngaloo ndlela ilitye ledaka alifani nelitye okanye udongwe, nangona zonke ezintathu zintlobo ze- shale . Isetyenziselwa ukubhekisela kuyo nayiphi na ingqungquthela ehlanjululwayo ehlukeneyo eyahlukahlukileyo ukusuka kwindawo ukuya kwindawo, okanye ukubunjwa kwayo ngqo akuqinisekanga kakuhle.
Iifoto zoMhlaba zoMhlaba. Ifoto (c) ngo-2002 u-Andrew Alden, onikwe ilayisenisi kwi-About.com (umgaqo-nkqubo wokusetyenziswa ngokufanelekileyo)
I-Playa (i-PLAH-yah) igama lesiSpanish elwandle. EUnited States, ligama lokulala elwandle elomileyo.
I-Playas yindawo yokuphumla yendawo enqabileyo echithwayo ukusuka ezintabeni ezibajikelezile. I-playa yeDry Lake uLucerne isesidla saseMojave saseKalifornia esingaphantsi kweCalifornia, ngaphesheya kweSan Gabriel ezintabeni ezivela kwingingqi yaseLos Angeles. Iintaba zigcina ubuncwane boLwandle lwasePacific, kwaye i-bheddi yelitye igcina amanzi ngokushisa okungaqhelekanga. Eli lonke ixesha, eli li-playa. Iindawo ezinomileyo zehlabathi zineenkcukacha zokudlala. Funda kabanzi malunga nemidlalo yokudlala.
Ukuqhubela phambili (nangaphezulu) i-playa yinto enomntu osebenzisa izitalato. I-Nevada playa ebizwa ngokuba yi-Black Rock Desert ithatha indawo ye-geologic njengendawo yendalo yokubonakalisa i-artistic kunye nekcubeko kwintetho yomlilo.
Iifoto zoMhlaba zoMhlaba. Ifoto ifanelekileyo iWindowsRidden yeFlickr.com phantsi kweLayisense yeCredit Commons
Izipaka ziindawo zomhlaba, ngokuqhelekileyo isanti okanye igravel, esuka ukusuka elunxwemeni ibe ngumzimba wamanzi.
Spit yigama lesiNgesi lasendulo elibhekisela kwii-skewers ezisetyenziselwa ukugaya ukutya; Amagama anxulumeneyo ayenomthi kwaye aphefumula . Ifom ifomu ithathwa yi-drift longshore ibe ngamanzi avulekileyo njenge-inlet, umlambo okanye umda. Ukuphala kungabinweba kweso siqithi. Izicatshulwa zinokwandisa iikhilomitha kodwa zihlala zifutshane. Oku ku-Dungeness Spit eWashington, efikelela kwisiKhwa ​​saseJuan de Fuca. Kwimitha engama-9, i-spit endala e-United States, kwaye iqhubeka ikhula namhlanje.
Ukuthungulwa kwempahla - izinto eziphathekayo zokungcola ezivela kwimigodi-zibandakanya iimali ezinkulu zomhlaba kwaye zichaphazela umjikelezo womhlaba wokukhukhula komhlaba kunye nendawo yokudumba.
I-Goldredreders kwi-1860s yaqulunqa yonke i-gravel kule mlambo yaseCalifornia, yahlamba iqhekeza layo elincinci legolide , yalahla iitrasi emva kwazo. Kunokwenzeka ukwenza olu hlobo lwemigodi yamanzi ngokufanelekileyo; indawo yokuloba ikhupha udongwe kunye ne-silt ukwenzela ukukhusela imimandla engezantsi, kwaye i-tailings ingafakwa kwaye ihlwayelwe. Kwilizwe elikhulu elinabemi abambalwa, ukuthotywa kweminye ingakwazi ukunyamezela ubuncwane obuthileyo. Kodwa ngexesha lokugqithisa kwegolide laseCalifornia , kwakunezinto ezininzi zokungabikho. Imifula yaseSierra Nevada kunye neGreat Valley yayiphazamiseka kakhulu yimizila eyayihamba ngayo kwaye iifama zahluleka emva kokuba zikhukhula ngodaka olubi. Ipalamente yombuso yayingasebenzi kuze kube yilapho umgwebi wasemagunyeni wayevinjelwe ukuchithwa kwemigodi yamanzi ngo-1884. Funda kabanzi malunga nayo kwi-Central Pacific Railroad Indawo yeMbali yeMbali.
Uphononongo olutshanje lugqiba ukuba yonke imisebenzi esenzayo ekuhambiseni idwala, amanzi kunye nezidalwa ezijikelezayo ezenza uluntu lube negosa enkulu ye-geomorphic efana nemifula, iziqhumane kunye nabanye. Enyanisweni, amandla omntu ayaphumelela ngakumbi kunokuba yonke inkunkuma yomhlaba ifike ngexesha.
Iifoto zoMhlaba zoMhlaba. Ifoto (c) 2005 u-Andrew Alden, onikwe ilayisenisi kwi-About.com (inqubomgomo yokusetyenziswa ngokufanelekileyo)
Iitrabhu zizakhiwo ezinqabileyo okanye zincinci ezakhiweyo zentlanzi. Lo mhlaba ubonisa ulwandle lwamandulo.
Lo mlambo oselunxwemeni ubonisa ulwandle lwangaphambilini lweLayin Lake e-nort-central central Oregon, i-Oregon Outback. Ngethuba leminyaka yeqhwa, amachibi athatha ininzi enkulu, iinqonga eziphantsi kwiphondo laseBasin kunye ne-Range yase-American. Namhlanje loo mabhasi ayenzileyo, amaninzi awo awonakalisa ukudlala. Kodwa xa amanzi ahlala khona, izidumba ezivela ezweni zahlala kwii-shorines zaza zadala iindawo ezinxweme ezide. Ngokuqhelekileyo imihlaba emininzi ye-paleo-shoreline ibonakala kwimigqomo yesitya, ngasinye sibonisa umda wonxweme, okanye i-strandline. Kwakhona, ngamanye amaxesha imilasi iphikisiwe, ukunika ulwazi malunga nenkqubela ye-tectonic ukususela ngexesha eliyilwe ngayo.
I-Strandlines ngaselunxwemeni inokuthi iphakame ngokuphakamisa iilwandle okanye iipulatifomu eziqingqiweyo .
I-tombolo ibha efikelela ngaphandle ukusuka elunxwemeni, idibanisa nesiqithi. Kule meko, ibha yaqina ukuba isebenze njengendawo yokupaka. (ngaphezulu ngaphantsi)
I-Tombolos (ivakalisi kwi-"TOM") ifom njengenduli ye-offshore, okanye i-stack, iguqula amaza angena ejikelezayo ukuze amandla abo ahluthe isanti phakathi kwamacala amabini. Emva kokuba i-stack ihlahlela kumanzi wamanzi, i-tombolo iya kulahleka. Izitampu azihlali ixesha elide, kwaye ke kutheni ama-tombolos aqhelekanga.
Jonga eli nqaku ngezinye malunga ne-tombolos, kwaye ubone le galari ngemifanekiso eninzi ye-tombolos.
I-Tufa yiindidi ezinobungakanani be- travertine ezivela kumthombo wamanzi angaphantsi kwamanzi. Izinga lamanzi laseMono Lake liyancitshiswa ukuze libonakalise iindonga zalo.
Iibhulophu azifani nezinye iintaba ekuthi zakhiwe (zifakwe), ayiyiboyiweyo (ikhutshwe). Jonga iintlobo eziphambili zeentaba-moya apha .
Ukujonga kwi-Valley Valley
Iimephu zeGeologic ze-50 zaseUnited States
Igalari yeTombolo: Iindlela eziqhelekileyo ze-Golden Sand Island
Umfanekiso weGlosari ye-Geological Landforms
Izalathisi zesiXeko seGenealogy
Kutheni Kufuneka Utshintshe Utshintsho?
Usos de 'Like' ngeIngles